Windows 11 hadda waa rasmi: kani waa nidaamka cusub ee Microsoft ee ku shaqeynaya | Wararka Windows
Qolka Ignatius | | General, Windows 11
Sida Microsoft ay ku dhawaaqday maalmo ka hor, maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka Juun Shirkadda Microsoft ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay waxa beddeli doona Windows 10. Dhowr maalmood ka dib markii lagu dhawaaqay dhacdada maanta, Windows 11 ISO buuxa ayaa la daadiyay, oo aan ka hadalnay maqaalkan, sidaa darteed dhacdadani waxay kaliya si rasmi ah u xaqiijisay qaar ka mid ah wararka ka iman doona qaybta xigta ee Windows.
Sidii la filayay, isbeddelada muuqaalka ayaa ah kuwa ugu xiisaha badan, laakiin xaaladdan ma ahan waxa ugu muhiimsan Windows 11. Waxa ugu muhiimsan Windows 11 waa suurtagalnimada rakibi barnaamijyada android on Windows. Haa, markaad akhrinaysid, garaac miiska labada Google (oo leh ChromeOS) iyo Apple (kuwaas oo ka saaray shaqeyntaas macruufka markii macOS Big Sur la bilaabay).
1 Naqshad cusub
2 Wax soo saarka kordhay
3 Is dhexgalka Kooxaha Microsoft
4 Widgets wuxuu la soo noqonayaa Windows 11
5 Ku rakib barnaamijyada Android
6 Helitaanka Windows 11
7 Shuruudaha Windows 11
Isbeddelka naqshadeynta ee soo jiita dareenka ugu badan waxaa laga helaa goobta shaqada, task bar oo ka tegey dhigista astaamaha dhinaca bidix ilaa qaybta dhexe, sida nidaamyada kale ee hawlgalka. Waxa ugu wanaagsan oo dhan, haddii aanaan jeclayn isbeddelkan, waan sii wadi karnaa isticmaalka qaybinta ku timid Windows-ka noocyadii ugu horreeyay.
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa Windows 11 waraaqaha kombiyuutarkaaga
Markaad gujineyso batoonka bilowga, daaqad ayaa la soo bandhigayaa, oo leh Geesaha wareegsan, taas oo aan ahayn feer badhanka guriga, laakiin waxaa lagu soo bandhigayaa bartamaha shaashadda. Daaqaddaan, barnaamijyadii aan horey ugu calaamadinay kuwa ugu cadcad, feylasha aan dhawaan furay iyo helitaanka dhammaan barnaamijyadii aan kumbuyuutarka ku rakibnay ayaa lagu muujiyay.
Dusha sare ee sanduuqan, waxaad ka heli doontaa sanduuqa raadinta, Sanduuqa Raadinta ee aan u adeegsan karno raadinta codsiyada, dukumiintiyada, sawirrada, fiidiyowyada, xulashooyinka meerimaha dejimaha ama si toos ah uga baaraan internetka, isla shaqooyinka ay Windows 10 horeyba noo siiso.
Wax soo saarka kordhay
Waxqabadka Snap Layouts (sugaya inuu arko sida ay ugu turjumayaan Isbaanish) wuxuu noo ogolaanayaa inaan si dhakhso leh u dhaqaaqno kuhaboon codsiyada furan / daaqadaha shaashadda, ama isla bar bar, saddex meelood, rubuc ... si toos ah uga soo qaad badhanka badiyaa adoo riixaya muddo dheer. In kasta oo ay run tahay in muuqaalkan horeyba looga heli jiray Windows 10, iyadoo Windows 11 ay ku darsadeen habab cusub oo loogu qaybiyo barnaamijyada.
Si kastaba ha noqotee, muuqaalka ugu soo jiidashada badan ee wax soo saarka ee Windows 11 waxaa laga helaa Snap Groups (waxaan sidoo kale sugeynaa turjumaad). Shaqadani way noo oggolaanaysaa codsiyada kooxda kombiyuutarrada taasina sidoo kale waxay leedahay xusuus. Haddii aan ku xirno kormeeraha dibadda kumbuyuutarkayaga oo aan ku dhisno laba ama in ka badan oo codsi ah, markii aan ka jareyno, barnaamijyadu way baaba'ayaan, laakiin haddii aan dib u xirno, barnaamijyadu way furmayaan oo waxay isla fiirinayaan isla desktop-ka.
Is dhexgalka Kooxaha Microsoft
Qalabkii Kooxaha ee Microsoft wuxuu noqday mid caan ah intii lagu jiray cudurka faafa ee coronavirus ee ka dhex dhacay shirkado aad u tiro badan. Microsoft ma rabin in laga tago oo waxay ka shaqaysay a Noocyada Kooxaha Microsoft ee qof walba, nooc ka kooban shaqooyin yar laakiin in ka badan oo ku filan abaabulka deegaanka qoyska, koox asxaab ah ...
Iyadoo la adeegsanayo Windows 11, Kooxaha Microsoft waxaa lagu dhex daray Windows 11, iyadoo laga tagaayo Skype, wicitaanka fiidiyowga iyo arjiga fariimaha oo shaqooyinkooda sidoo kale laga heli karo Kooxaha, sidaa darteed waxay u badan tahay in Skype dhowrka maalmood hayn mana la yaabno inaan aragno sida Microsoft goor dhow ama ka dib u shaacinayo inuu maqan yahay.
Widgets wuxuu la soo noqonayaa Windows 11
Muuqaalkii ugu horreeyay, iyo kii ugu dambeeyay, ee aaladaha Windows ee kumbuyuutareedka wuxuu ahaa Windows Vista, nooca ugu xun Windows illaa iyo hadda, ogolaansho lagahelay Windows 8. Aaladaha ayaa lawaayay nooca xiga ee Windows, Windows 7, illaa iyo hadda ma aysan haysan t ayaa soo muuqday ilaa cusbooneysiinta daaqadaha ugu dambeeyay, kaas oo aan dhigo meel toobiye ah oo kuyaala barta shaqada taas oo muujinaysa heerkulka hadda jira.
Hadda waa inaan aragnaa haddii horumariyayaashu ay ku sharfaan widget-yadaas mar kale, iyo inaanan gacanta ku haynin kaliya kuwa ay bixiso shirkadda Microsoft.
Ku rakib barnaamijyada Android
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ugu muhiimsan ee aan ka helayno Windows 11 ayaa ah in gudaha Microsoft Store, aan u soconno raadi dukaamo kale oo app ah. Waqtiga la soo saaray, dukaanka ugu horreeya ee la heli karo waa Amazon Store, dukaanka codsiyada Amazon si loogu rakibo qalabkaaga Kindle.
Dukaankan, ayaa noo oggolaan doonta inaan ku rakibno barnaamijyada Android-ka Windows 11 oo ay ku maamulaan iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin, sidii iyagoo dhalasho ahaan ah. Sida aan awoodi doonno inaan ku rakibno codsiyada ka socda Amazon Store, waxaan sidoo kale rakibi karnaa codsiyada aan ka soo degsano Play Store, illaa iyo inta Google u oggol yahay rakibidda adeegyada Google, maadaama haddii kale, ay noqon doonto wax aan macquul ahayn.
Helitaanka Windows 11
Sida la filayo, Windows 11 ayaa loo heli doonaa sidii casriyeyn bilaash ah dhammaan adeegsadayaasha haysta kombiyuutar isku habboon oo ay maamusho Windows 10.
In kastoo taariikhda la sii deyn doono nooca ugu dambeeya Waxaa loo qorsheeyay ciida masiixigaToddobaad gudihiis, beta-kii ugu horreeyay ee rasmi ah ayaa lagu bilaabi doonaa barnaamijka Windows Insider.
Shuruudaha Windows 11
Windows 11 ma noqon doono nidaam hawlgal oo lagu rakibo karo ficil ahaan kumbuyuutar kasta sida haddii ay ku dhacday Windows 10, ilaa shuruudaha waa la kordhiyay sida haddii processor-ku yahay 64-bit (ma jiri doono nooc 32-bit ah) 1 GHz oo leh laba koronto ama ka badan iyo in qalabka lagu maareeyo 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah.
Laakiin, dhibaatada adeegsadayaashu la kulmaan waxay ku jirtaa shuruudaha cusub ee qalabka loo baahan yahay si ay u awoodaan inay ku rakibaan qaabkan cusub ee Windows 11: TPM 2.0 TMP 2.0 waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo amniga qalabka Iyada oo loo marayo furayaasha sirta ah ee kaliya ee laga heli karo qalabka hadda jira (5/6 sano ee la soo dhaafay).
Si loo nadiifiyo wixii shaki ah, Microsoft ayaa diyaar noo ah codsi taas ayaa na ogeysiin doonta haddii qalabkeenu ku qalabeysan yahay TCM 2.0. Haddii qalabkeenu aanu is-waafaqsanayn, waxaan sugi karnaa nooca ugu dambeeya ee Windows 11 in la sii daayo oo aan sugno balastar la sii daayo oo ka saaraya shuruuddan rakibidda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Windows » General » Windows 11 hadda waa rasmi: kani waa nidaamka hawlgalka cusub ee Microsoft
Windows 11 wuxuu ku darayaa iswaafajinta barnaamijyada Android: waa sida ay u shaqeyso